Ny nitondran'i Jesosy ireo tanora hijery ny afobe.
Nisy tanora combiana 7 izay nentin’i Jesosy Kristy nijery ny tany amin’ny helo, tantara tena nisy ary tena marina izy ity, ary nadika amintsika mba hoenti-manamarina fa tena misy tokoa ny helo fa tsy honohono ihany.
Fijoroana vavolombelona voalohany, izay hita ao amin’ny Lioka 16: 19-25:” Nisy lehilahy manan-karena anankiray niakanjo volomparasy sy rongony fotsy madinika sady nanaram-po fatratra isan-andro tamin'ny fahafinaretana. Ary nisy olo-malahelo ferena anankiray atao hoe Lazarosy napetraka teo anilan'ny vavahadiny; ary naniry mba hihinana izay latsaka avy tamin'ny latabatr'ilay manan-karena izy, fa ny alika kosa no avyka nilelaka ny feriny. Ary maty ilay malahelo, dia nentin'ny anjely ho any an-tratran'i Abrahama; ary maty koa ilay manan-karena, dia nalevina; ary raha nijaly tao amin'ny fiainan-tsi-hitaizy ka niandrandra, dia nahita an'i Abrahama teny lavitra eny sy Lazarosy teo an-tratrany. Ary izy niantso ka nanao hoe: Ry Abrahama raiko ô, mamindrà fo amiko, ka iraho Lazarosy mba hanoboka ny tendron'ny rantsan-tanany amin'ny rano mba hampangatsiaka ny lelako; fa fadiranovana aho eto anatin'ity lelafo ity. Fa hoy Abrahama: Anaka, tsarovy fa hianao efa nahazo ny zava-tsoanao tamin'ny andro niainanao, ary Lazarosy kosa ny zava-dratsy; fa ankehitriny izy no ampifalina aty, ary hianao kosa no fadiranovana ».
Mazava arak’izany ny voalazan’ny Baiboly momba ny Afobe, araka ny hitantsika sy izay novakiana teo dia mizara roa mazava tsara ny làlana dia misy ny “lanitra” ary koa ny “helo”. Tsy misy toerana hafa ankoatr’ireo raha toa ka miala eto ambon’ity tany ity isika, tsy misy ny hoe eo anelanelany araka ny voalaza, fa ianao any amin’ny fahaverezana mandrakizay na voavonjy mandrakizay. Ary tena mazava ny voalazan’ny Soratra Masina, fa rehefa mandao izao fiainana izao ny olona dia mandeha amin’ny tontolo hafa dia tsy inona izany fa ireo izay efa voalaza tetsy ambony, ka aoka isika tsy hanana fahazarana, na hanana fisainana indraindray hoe: tena misy marina ve ny “lanitra” sy ny “helo”, ary tena misy tokoa izany araka ny fijoroana vavolombelona izay nataon’Izy ireo.
Tamin’ny faha 11 avrily 1995, dia nomen’Andriamanitra tolon-tsaina izahay ny amin’ny hoenti-manova ny fiainanay. Ary tamin’izany dia nanomboka nihanahafantatra ny momba an’Andriamanitra sy ny teniny. Ka indreto izahay fito, vonona hijoro vavolombelona sy handray andraikitra ny amin’ny fanaparitahana izao zavatra izay nataon’Andriamanitra taminay izao, ary hilaza sy hanambara ny marina sy ny faminaniana izay misy manerana izao tontolo izao.
Teo amin’ny tamin’ny 10ora teo ho eo, Izahay dia niara-nivavaka fa hanomana ny fitsangatsanganana izay natao tamin’io andro io, tampoka teo anefa! Tonga ny tamin’ny 10ora maraina, nisy hazavana be niditra teo amin’ny varavankely anankiray. Ary raha vao nahita izany izahay dia niova ny fiteninay ka lasa feno ny Fanahy Masina, izany hoe niteny tamin’ny fitenin’ny Anjely.
Nandritra izay fotoana izay ny zavatra hita sy nahavariana anay dia ny fahitana ilay hazavana izay tsy misy toa azy, fa tena mamirapiratra, tsy toy ny hazavan’ny masoandro, fa tena mamirapiratra be mihitsy, ary ankona mihitsy aza izahay tamin’izany. Eo afovoan’ilay hazavana be dia ahitana Anjely marobe izay mitafy fitafiana fotsy manjopiaka, tena mahafinaritra, sady feno fahatsarana tanteraka.
Ary teo afovoan’ireo Anjely marobe dia nahitana zavatra mamirapiratra sady tena mahafinaritra, sady tsy mampino, “miendrika lehilahy”, feno ny voninahiny. Ka ny endriny dia endrika tena hafa mihitsy, araka ny voalazan’iroe nijoro vavolombelona aza moa dia hoe: “un être spécial”. Lehilahy miakanjo fotsy sady lava be, ary ny volony dia toa miloko ranombolamena, araka ny voalazan’ireo ihany moa dia hoe: “Comme des fils d’or”, ary izahay dia tsy nahajery ny tavany satria izy mazava sy mamirapiratra tsy misy toa izany. Nandritra izany dia tsikaritray ihany koa misy fahikibo volamena ny kibony sady manao fehin-tratra volamena ihany koa. Ary nahitana soratra toa izao tamin’izany: “Roi des Roi, Seingeur des Seigneur”. Ahitana kiraro volamena ihany koa ny tongony, ary ny fahatsarany dia tsy manam-pahataperana, fa tena lafatra indrindra ka tsy hita pesipesenina ny fahatsarany. Ary rehefa nahita ny voninahiny izahay dia nandohalika. Ary nanomboka teo dia efa nandre ny feony. Feo tena tsara, mahafinaritra, ary isaky ny teny izay aloakiny ny vavany dia henonao tena mandona ny fonao izany, dia toy ny sabatra roa lela. Araka izay voalaza ao amin’ny Hebreo 4 : 12 teny tsotra nefa tena manan-danja. Ary henonay tsara izany teniny izany manao hoe: « Fa velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra ka maranitra noho ny sabatra roa lela, ka manindrona hatramin'ny fampisarahana ny aina sy ny fanahy ary ny tonona sy ny tsoka, ka mahay mamantatra ny eritreritra sy ny fisainan'ny fo».
Ary ny voalaza ao amin’ny Baiboly izay hita ao amin’ny Joela 2 : 27 manao hoe : « Dia ho fantatrareo fa ao afovoan'ny Isiraely Aho, Ary Izaho no Jehovah Andriamanitrareo, fa tsy misy hafa; Ary tsy ho menatra mandrakizay ny oloko.» Izay teny manambara ny fanomanana izao tontolo izao.
Manaraka izany nisy trangan-javatra tsy nampoizina nitranga, lasa nisy vato tonga hoazy teo ary ny Tompo dia niara-nipetraka taminay teo koa, ary samy nipetraka teo avokoa izahay. Ny haben’ilay vato dia teo amin’ny 20cm teo ho eo, ary mihataka kely ho im-balon’ny ankihibe eo ho eo amin’ny tany. Ary nahitana lavaka lehibe ao afovoan’ny gorodona izay nitoeranay. Lavaka sady tena ngeza no lalina be ihany koa, tsy hita fiafarana. Nony afaka kelikely anefa dia niala ilay vato izahay ary dia nidina nanaraka ilay lavaka, izay tena maizina tokoa ary tsy hifankahitana. Teo dia nentiny tany amin’ny faran’ny tany.
Nandritry ny fotoana nandehana nidina, ka nahita ity lavaka maizina sady mampatahotra ity dia nangorohoro izahay, ary nilaza tamin’i Jesosy mihitsy aza hoe: “Jesosy ô tsy te handeha amin’izao toerana izao izahay! Aza entina aty re zahay Tompo ô! Afaho aty izahay re Jesosy ô! “ Tamin’ny endrika feno fitsikiana sy miramirana no namaliany anay hoe: “Izao zavatra izao dia ilaina, ary ny zavatra rehetra izay hitanareo aty, dia entinareo ary hambaranareo amin'ny hafa”.
Ary tao anatin’izany dia niditra amina “tunel” izahay, izay miendrika tandroka. Teo koa dia nanomboka nahita aloka, devoly sy endrik’i satana, izay mandeha mifamezivezy. Ka mbola nanohy nidina hatrany ihany izahay. Nony afaka fotoana fohy dia naheno hoe amina toerana malalaka sady mampatahotra izany, ary tena mampatahotra tokoa. Fa noho ny farany dia tonga teo akaikina lava-bato iray , izay tena mampitahotra tokoa, sady tena mampihoron-koditra izany varavarana izany. Izay miendrika zaridaina na saha iray, ka nanda noho izany izahay ny tsy hidirana ao amin’io toerana io. Nandritra izany koa dia nanomboka nahatsapa hafanana be sy fofona tena ratsy, ary raha vao tafiditra tao, ny zavatra hita dia tena mahatsiravina tokoa, toy izany ireo sary hitanao ao dia tena mankaloiloy tokoa. Ka ny ankamaroan’ny toerana ao dia feno afo avokoa, ary ahitana olona marobe eo afovoan’izany afo izany, izy ireo dia hodidinina afo izay tena mivaivay tokoa. Ary misy rivotra be mampirehitra sy mampiredareda izany, tena hita fa mahatsiravina ny mijery izany rehetra izany. Tsy sitrakay ny hijery ny zavatra natoron’ny Tompo anay. Ao amin’io toerana io ihany koa dia mizarazara maromaro, ao ireo tena anjakan’ny fampijaliana tanteraka, ao kosa ireo izay mijaly ihany fa kelikely ihany, nefa dia samy mijaly avokoa ireo olona ireo. Ny toerana voalohany nitondran’ny Tompo anay moa dia ilay antsoina hoe " La vallée des Chaudrons" io no anaran’ilay toerana izay nambarany taminay. Ao anatin’izany toerana izany dia misy karazana vilany maromaro hita mitandahatra marobe, ary isaky ny vilany dia ahitana zavatra mangotraka sady menamena be toy ireny mivoaka amin’ny volkano ireny.
Ary ao no toerana andehanan’ny fanahin’ny olona nanao ratsy rehefa miala ety an-tany voalohany ny fanahiny, aorian’ny fahafatesany. Ka ao anatin’izany dia ahenoanao olona mikiakiaka mangata-pamonjena, feo mitoreo, teo ihany koa ireo fanahy izay nahota an’i Jesosy dia nangataka famonjena izay midradradra milaza hoe: "Seigneur, aie pitié de nous! Seigneur donne-moi une chance de sortir de cet endroit ! Seigneur, sors-moi d'ici et je vais dire au monde que cette place existe réellement !". nidradradra nangata-pamelana sy famonjena, nefa tsy nijery izany Izy. Ary ahitana olona anapitr’isany maro amin’izany toerana izany, ao ny tanora, ny lehilahy, ny vehivavy. Tao ihany koa no nahitanay ireo atao hoe « homosexuel », ireo mpisotro toaka sy mpifoka zava-mahadomelina, ary izy ireo dia mikiakiaka avokoa, hiakam-pijaliana, mitomany, tena tsy hita izay hilazana azy fa dia tena fijaliana tokoa no hita any. Ary nanotany tena mihitsy aza izahay hoe mandra-pahoviana no hijalian’ireto olona ireto amin’izao toerana izao? Hita ao amin’izany ihany koa, misy kankana mivoaka sy miditra ny vavan’ilay olona, ny masony izay efa tsy mandeha main’izay izy intsony, ny sofiny, ny orony.. ka ireo kankana ireo koa dia miditra amin’ny vatan’ilay olona. Ary hoy ny tenin’Andriamanitra momba izany : Esaïe 66:24 « Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi; Car leur ver ne mourra point et leur feu ne s'éteindra point; Et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. » sy ao amin’ny Marc 9:44 "...où leur ver ne meurt point, et où le feu ne s'éteint point. " "Ary hivoaka izy ireny ka hijery ny fatin'ny olona izay efa niodina tamiko; Fa ny kankany tsy ho faty, ary ny afony tsy hovonoina, Ary hataon'ny nofo rehetra ho fahavetavetana izy." nihoron-koditra sady natahotra tokoa izahay nanoloana izany rehetra izany, ary ny lelafo ao amin’izany toerana izany dia sahabo eo amin’ny 3 ka hatramin’ny 5m eo ho eo ny haavony. Ary isaky ny lelafo iray dia ahitana fanahin’olona iray eny amboniny, dia ny fanahin’ireo olona izay very, sy tonga any amin’ny fahaverezana.
Ary teo Jesosy dia namela anay hijery ny endrik’ireo olona izay efa very tao amin’ny afobe. Teo ihany koa no nahitana fa ny endrik’ireo olona izay efa manomboka miharavan’ny afo, izay mijery ny tavan’i Jesosy ary midradradra mitady famonjena, manao hoe : « Jesosy ô ! mba vonjeo re, mamela ahy, raha mba sitrakao, esory amin’ity toerana ity.» Nefa Jesosy tsy nihaino azy fa dia nomeny lamosina ireo dia lasa nandeha Izy. Ary rehefa nanao izany Jesosy dia nanomboka niteny ratsy ny anarany izy ireo, nanevateva azy, ary tsy iza io olona io fa i John Lennon izy dia mpikambana tao amin’ny vondrona satanika, sady tao amin’ny groupe « Les Beatles ». Nandritry ny androm-piainany izy dia tsy nino an'Andriamanitra, sady tsy niraharaha izany. Ary efa nilaza ihany koa aza hoe tsy misy Andriamanitra. Ary ankehitriny izy dia any amin’ny afobe. Nefa Jesosy dia velona mandrak’ankehitriny, sy amin’izao fotoana izao. Ary tsy foana akory ny Kristianina.
Raha nandeha teny amin’ny manodidina ity toerana ity izahay dia misy tanana maro mangataka famonjena, miantso anay. Miantso an’i Jesosy hoe mamela ny helokay, mamindrafo aminay, nefa Jesosy tsy nijery azy ireo akory, na nihaino ny fitarainany.
Ary rehefa izany dia nifindra toerana hafa indray koa. Dia toerana tena faran’izay mahatsiravina indrindra, eo no tena ahitana habibina tsy roa aman-tany, ary ao amin’io toerana io no foiben’ny afobe. Ka ny hita ao amin’io toerana io dia ireo olona izay efa nino an’i Jesiosy Kristy ho Tompo sy Andriamaniny, nahalala ny tenin’Andriamanitra, ao no ahitana ireo pastera, evanjelistra, sy ireo karazan’olona toa izany . Ary ny fampijaliana mahazo azy ireo aza dia tena mahatsiravina ary tena mafy kokoa noho ny an’ireo olona izay tsy mpino tsotra. Araka ny voalaza ao amin’ny Hebreo 10: 26-27 "Fa raha minia manota isika rehefa nahazo ny fahalalana tsara ny marina, dia tsy misy fanatitra noho ny ota intsony, fa fiandrasana mahatahotra amin'ny fitsarana ary ny fahatezerana mirehitra izay handany ny fahavalo rehetra kosa." .
Ireo olona ireo matoa tonga tany amin’izany toerana izany dia noho ny fahotana izay nataony, toy ny halatra, ny lainga maro isan-karazany. Isika dia tsy tokony handainga amin’Andriamanitra, matetika mantsy ny olona dia mihevitra fa ny fihetsika ivelany no hitsarana azy, raha ny amin’ny maha olombelona dia marina izay, nefa amin’Andriamnitra dia ny ao anatinao , ny fanahinao no hitsarana anao. Ary tokony hatoky an’Andriamanitra mandrakariva isika, araka ny voalaza ao amin’i Lioka 12: 48 "Fa izay tsy nahalala kosa ka nanao izay zavatra tokony hikapohana azy dia hokapohina kely. Fa izay nomena be, dia be no hotadiavina aminy; ary izay nampitehirizina be, dia bebe kokoa no hadinina aminy.".
Misy ireo olona milaza ho mahay ny tenin’Andriamanitra, sy mahalala izany, nefa raha ny fiainany andavanandro dia tsy arak’izay akory, ary tsy mitory fahamarinana eo imason’Andriamanitra “Aoka isika tsy hanao tsinontsinona ny asan’Andriamanitra, na atao ho toy ny kilalao, fa rehefa atao dia ataovy amin’ny fo, sy ny fahamarinana ary ny fahamasinana”.
Koa mahereza rahalahy, mahereza ranabavy, fa ny Tompo homba anao, manaova ny tsara mandrakariva, aza manao toetra tsy mendrika an'Andriamanitra, ary aoka isika hifankatia; araka ny tenin'i Jesosy hoe: "Mifankatiava ianareo toy ny nitiavako anareo" koa isika Kristianina hanao toa izany koa.
Ry havana tena misy sy marina tokoa ny afobe na ny helo, ka aoka isika hisafidy ny làlana marina dia ny fanarahana an'i Jesosy Kristy izay Tompo sy Mpanjaka be voninahitra, ka mijoroa, aza menatra amin'ny maha Kristianina anao ianao, mijoroa mandrakariva ho vavolombelona eo amin'ny fiainanao manotolo. Raha mbola ao anatin'ny fisalasalana ianao dia ifikiro mafy ny finoana izay anananao, araka ny voalaza ao amin'ny Apokalypsy 3:11 izay milaza hoe: "Ho avy faingana Aho; tano mafy izay anananao, mba tsy hisy haka ny satroboninahitrao." Koa manomeza voninahitra mandrakariva ry havana, ary mivavaha ka aza mltsahatra fa ny fahavalontsika dia mierona tahaka ny liona mitady izay harapany. Ka izany indrindra no hitoerantsika mandrakariva eo amin'ny fiainana tsara maraka amin'Andriamanitra. Derao ary ankalazao ny Tomponao, fa hoy Izy ao amin'ny ISamoela 2:30 "Koa izany no anaovan'i Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely, hoe: Efa voalazako tokoa fa ny taranakao sy ny tarana-drainao no handeha eo anatrehako mandrakizay; fa ankehitriny kosa, hoy Jehovah, sanatria Ahy izany; fa izay manome voninahitra Ahy no homeko voninahitra, ary izay manamavo Ahy no ho afa-baraka" Koa derao mandrakariva ary ankalazao dia hohitanao ny voninahiny, tahaka ny nahitan'ireto tanora ireto izany.